Alarobia, Oktobra 24, 2012 Alarobia, Oktobra 24, 2012 Douglas Karr
Manara-maso hatrany ny kaonty webmaster an'ny mpanjifantsika izahay. Tsy kisendrasendra, raha ny hevitro, ny laharan'ny mpanjifanay satria afaka mamantatra sy mampihena ny lesoka mipoitra ao amin'ny Webmasters izahay. Google dia manohy mandroso ny algorithman'izy ireo mihoatra ny andrana sy marina lalao izay orinasa SEO maro nilalao taloha. Mitana andraikitra lehibe amin'izany ny mpanoratra.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana filaharam-piarahamonina amin'ny lazan'i Google, dia mandroso ny algorithm pagerank azy ary manatsara ny kalitaon'ny valiny amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny lazan'ny rohy fotsiny, fa ny lazan'ny fiaraha-monina sy ny maha-zava-dehibe azy koa. Ary raisin'izy ireo am-pahamatorana izany.
Androany, nahazo ity fanamarihana mahaliana ity izahay tao amin'ny Webmasters. Sambany izahay nahita an'ity… Mangataka an-tsitrapo ny fananana izany ny Webmasters rohy ny pejiny Google+ mankany amin'ny kaonty Google+-dry zareo:
Vaovao tsara izany ary nanosika ny mpanjifanay hanaiky ny rohy avy hatrany izahay! Misy rohy mianatra bebe kokoa ao amin'ilay hafatra manondro an'io Fikarohana ao anaty Google pejy miaraka amin'ity blurb manaraka ity:
Mora kokoa noho ny hatramin'izay izao ny hifandraisan'ny olona aminao na ny orinasanao — eo amin'ny Google. Ny olona dia afaka mahita ny piraofilina Google+ sy pejy mahasarika sy mahasarika eo amin'ny lafiny ankavanan'ny valim-panontaniana rehefa mifandraika amin'ny fikarohana azy ireo. Ho an'ny fikarohana manokana, toy ny anaran'ny tarika malaza, dia azonay aseho ny pejy Google+ an'ny tarika.
Hita fa ny valin'ny fampifandraisana ireo roa ireo dia sidebar mahafinaritra iray novokarina teo amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana rehefa karohina ny marikao:
UPDATE: Ilay mpandinika SEO dia nahita vatosoa hafa… antsipirihany momba ny manao ny fifandraisana avy amin'ny Google+ mankany amin'ny Webmasters amin'ny alàlan'ny Google+. Mahafinaritra ity!
Tags: -mpamoronaGoogle Plusgoogle + mombamombavalin'ny fikarohanaWebmasterfitaovana webmaster
Lahatsary: ​​Detector BS's Marketing BS
sticker vita amin'ny vinyl
24 Okt 2012 amin'ny 5:57 PM
Noho izany ny zava-dehibe dia tsy ny fananganana rohy vaovao ary ny zava-dehibe ny mifantoka amin'ny media sosialy fa tsy ny fampiroboroboana rohy izay mety hiteraka voka-dratsy fa tsy mametraka anao ambony kokoa.